Sidee Lacag Loogu Sameeyaa Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee lacag looga sameeyaa twitter-ka?
April 27, 2021 0 comments 328
Ka helitaanka lacag shabakadaha bulshada ma aha hawl fudud. Xaqiiqdii, dad yar ayaa ku guuleystey inay aasaasaan shabakado nolol ahaan. Si tan loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo daraasado ku saabsan suuqgeynta dhijitaalka ah, qaabeynta qaabdhismeedka, farsamooyinka qancinta iibka, iyo arrimo kale oo badan oo la tixgelinayo.
Waxaa ka mid ah fikradaha muhiimka ah ee ay tahay inaad wax ka qabato si loogu beddelo shabakaddaada bulshada Ilaha lacagta, waxaad ku xisaabtami kartaa waxyaabaha soo socda:
Qeex ujeedada koontadaada iyo cidda loo diray:
Samee si aad u wanaagsan waxa aad rabto inaad ku gaarto koontadaada isla markaana si fiican u qeex badeecadaada. Waa inaad dejiso ujeeddooyin suurtagal ah in la gaaro, maaddaama, suuq-geynta dijitaalka ah, guushu aysan ahayn mid deg-deg ah, laakiin leh adkeysi iyo yoolal macquul ah, waxaad awoodi doontaa inaad xoojiso sumaddaada oo aad bilowdo soo saarista dakhli.
Dhinaca kale, qeexitaanka bartilmaameedka cidda alaabtu ku socoto waa mid aad muhiim u ah. Way ku habboon tahay in la sameeyo cilmi-baaris suuqa ama la fal-galka dadka isticmaala, si loo fahmo baahidooda, loona dejiyo yoolal ku saleysan tan.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in Twitter-ka uu yahay mid inta badan xog-ogaal ah oo dhakhso badan, sidaa darteed inaad u baahan tahay inaad naqshadeyso istiraatiijiyad ku habboon qaabkan baahinta ee aadka u firfircoon.
Soo saar maadooyin soo jiidasho leh oo soo jiita dareenka
Guushu waxay kuxirantahay sida ugu wanaagsan ee aan u maareeyno istiraatiijiyadeena kor u qaadista iyo suuqgeynta. Marka nuxurka soo jiidashada leh ee farsamooyinka ka dhaadhicinta macaamilku waxay noqon doonaan kuwo rasmi ah.
Horumarinta farriimaha tweets-ka si loo gaaro tan ma fududa, gaar ahaan astaamaha 280 ee kuu oggolaanaya twitter markaad wax daabacayso, markaa waa inaad sifiican u falanqeysaa sida loogu horumariyo astaantaada xeerarkan.
Sidoo kale, sawirada allusive, memes, GIFS iyo fiidiyowyada sidoo kale waa in loogu talagalay istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee kor u qaadista ganacsiga barta twitter. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku haysato tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha "xiiseynaya" alaabtaada.
Xilliga daabacaadda nuxurka waa muhiim. Waxaa la go'aamiyay inay jiraan waqtiyo uu jiro xiriir ballaaran oo adeegsadayaasha, sidaas darteed waa inaad jadwal u sameysaa daabacadahaada si habboon, si aad ula jaanqaado waqtiyadan.
Dhinaca kale, waxyaabaha aad daabacayso ma aha inay iskudhafaan daabacadaha kale. Tani waxay ka dhigan tahay, heerka xawaaraha ee tweets-ka, adeegsadayaashu waxay dareemi doonaan inay ka lumayaan waxyaabaha ka soo baxa koontooyinka kale waxaadna lumin kartaa kuwa raacsan.
La falgal isticmaalayaasha
Fiiro gaar ah oo ku filan kuwa raacsan ayaa saameyn togan ku yeelan doonta bartilmaameedkaaga. Macaamiisha suurtogalka ah waxay awoodi doonaan inay dareemaan inay xiriir toos ah kula leeyihiin. Tani waxay doorbidi doontaa isdhexgalka weyn ee kuwa raacsan tweets-kaaga iyo, sidaa darteed, faafinta weyn.
Warbixinada qiimeynta ee shabakadahaaga, waxaad awoodi doontaa inaad kormeerto waxqabadka ay soo qabatay, sidaas darteedna, falanqee oo tixgeli hagaajinta. Qiimeyntan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo softiweerka maamulaha warbaahinta bulshada.
Farsamooyin dheeri ah oo lagu kasbado dakhli
Kordhinta tirada dadka raacsan, waxaad awoodi kartaa inaad kobciso boggaga internetka qaarkood ee adiga kaa bixin doona. Bogagga sida SocialPubli, Twync, ama Publisuites ayaa kuu oggolaanaya inaad dakhli yeelato adoo dhiirrigelinaya tweets. Lacagtani waxay noqon kartaa in ka badan 50 euro halkii tweet ee la dallacsiiyay.
1 Qeex ujeedada koontadaada iyo cidda loo diray:
2 Soo saar maadooyin soo jiidasho leh oo soo jiita dareenka
3 Waqtiga Daabacaadda
4 La falgal isticmaalayaasha
5 Qiimee waxqabadka
6 Farsamooyin dheeri ah oo lagu kasbado dakhli
Sideen u tirtiri karaa boggeyga Facebook?
Sideen uga arki karaa fariimahayga Instagram kumbuyuutarkayga?